एनसीएस शेफील्ड - तत्व सोसायटी कार्यक्रम जानकारी
एनसीएस शेफील्ड - तत्व सोसायटी
आजकल संघीय समाज द्वारा संचालित NCS शेफील्ड मा शामिल हुनुहोस्!
तपाईंको ठाउँ सुरक्षित गर्नुहोस्
NCS सँग सम्बन्धित तपाइँको मौका सम्झनुहोस्।
एक अचम्मको गर्मीमा, तपाईं घरबाट टाढा रहनुहुनेछ, आफ्नो CV लाई बढाउनका लागि दक्षहरू विकास गर्नुहोस्, र अचम्मलाग्दो व्यक्तिहरू भेट्नुहुनेछ जुन तपाई कहिल्यै नबिर्सनुहुनेछ। त्यसोभए के तिमी पर्खिरहेका छौ? YES मा परिवर्तन सुरु हुन्छ!
PHASE 1: टोस्टर प्राप्त गर्नुहोस्
पहिलो, तपाईं प्रशिक्षक नेतृत्वको बाह्य गतिविधिहरूको मजा लिइरहेका घरबाट समय बिताउनुहुनेछ।
तपाईं एक्शन-पैक गरिएको साहसिकमा टोलीका साथ एक आउटडोर गतिविधि केन्द्रमा चट्टान चढाइने, पैदल यात्रा, क्यानोइङ, र तीरंदाजी जस्ता गतिविधिहरु लाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ।
PHASE 2: प्राप्त भयो
घरको नजिक, तपाईंको समूहले तपाईंको स्थानीय क्षेत्रको बारेमा समय सिक्न खर्च गर्नेछ।
तपाईले स्थानीय व्यवसाय र सामुदायिक संस्थाहरू बाट भेट्न पाउनुहुनेछ जसले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ र तपाइँको NCS टोलीका नयाँ कौशलहरू विकास गर्दछन्।
PHASE 3: तपाईंको मार्क बनाउनुहोस्
तपाईं आफ्नो समूहमा काम गर्नुहुनेछ र तपाईंको आफ्नै आफ्नै सामुदायिक कार्य प्रोजेक्टको लागि धनको लागि पिच गर्न काम गर्नेछ जुन तपाइँ कहाँ बस्नुहुन्छ वास्तविक फरक बनाउन सक्छ।
त्यसपछि तपाईले तपाइँको चिन्हलाई तपाईंको स्थानीय क्षेत्रमा बनाउनुहुनेछ, तपाईंको सामुदायिक कार्य प्रोजेक्ट तपाइँको टोलीको साथ दिईरहेको छ।
र सम्बोधन गर्नुहोस् ...
अन्तमा, जब तपाइँ तपाईंको सामुदायिक कार्य प्रोजेक्ट पूरा गर्नुभयो, यो एकमा मनाउन समय हो स्नातक पार्टी.
तपाइँ प्रधान मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ र स्वयंसेवकाई राख्न र तपाइँको स्थानीय क्षेत्र र NCS सँग जोडिएको अनन्य अवसरोंको पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईंको समयावधि आज परिवर्तन गर्नुहोस्
एनसीएसले केवल4हप्ताको अन्तमा बिचको साथमा, संगीत उत्सव र परिवारको छुट्टीको लागि धेरै समय छ। सम्पूर्ण NCS अनुभवले मात्र उपलब्ध वित्तीय सहयोगको साथ भोजन, गतिविधि र आवास सहित £ 50 खर्च गर्दछ। NCS बनाउनुहोस् तपाईंको गर्मीको अंश!
* यो तत्व सोसाइटीद्वारा वितरण गरिएको यो कार्यक्रमले तपाईंलाई £ 50 भन्दा बढी खर्च गर्नेछ, आवश्यक भएमा आवश्यक वित्तीय समर्थन *
तत्व समाजले वर्षभरि NCS कार्यक्रमहरू उद्धार गर्छ। कार्यक्रमहरू तपाइँसँग भाग लिनु भएको फरक फरक पर्न सक्छ, र वर्षमा तपाई कुन भागमा भाग लिनुहुन्छ, त्यसो भए निश्चय गर्नुहोस् कि तपाइँको छनौट गरिएको कार्यक्रम समावेश छ भनेर जाँच गर्नुहोस्।
थप जानकारीको लागि, हामीलाई 0114 2999 210 मा कल गर्नुहोस्, वा हाम्रो NCS टोलीलाई ई-मेल गर्नुहोस् ncs@elementsociety.co.uk
*** सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो £ 15 डिस्काउंट अनलाइन पाउनु हुने तत्वलाई चयन गर्नुहोस्! ***